प्रतिष्ठानमै १८ सय बढीको कोरोना जाँच, रिपोर्ट नेगेटिभ
जुम्ला – फैलिदो कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण रोकथाम गर्नका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाले ठुलो भुमिका खेल्दै आएको छ । संघीय सरकारदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस निन्त्रण गर्नका लागि जिम्मेवारी दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले माथिल्लो कर्णालीका पाँच जिल्ला जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालिकोट जिल्लाको कोभिड निन्त्रण गर्न जिम्मेवारी दिएको हो । कोभिड जिम्मेवारी सँगसँगै प्रदेश सरकारले सुरक्षित स्वास्थ्य सामग्रीदेखि एक करोड ७५ लाख बजेट उपलव्ध गराएको प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार विश्वराज काफ्लले बताए । उनले भने कोरोना भाइरस निन्त्रण गर्नका लागि प्रतिष्ठान कटिबद्ध रुपमा लागी परेको छ ।
माथिल्लो कर्णालीका पाँच जिल्लामा चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी स्वाब संकलन गर्ने र तिव्रगतिमा परीक्षण गर्ने गरेको प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डा. मंगल रावलले बताए । उनले भने प्रतिष्ठानको लगानीमा आरटी पिसिआर उपकरण खरिद गरि दुई सातादेखि कोरोना परीक्षणको थालनी गरेको हो । प्रतिष्ठानले पिसिआर उपकरण सञ्चालनमा ल्याएदेखि एक हजार ८ सय ८१ जना नागरिको स्वाब परीक्षण गरि रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ ।
परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको अस्पताल निर्देशक डा. रावलले बताए । प्रतिष्ठानले आइसियू भेण्टिलेटर सहित १२० बेडको आइसोलेसन अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ । चीनमा कोरोना भाइरस देखिएदेखि प्रतिष्ठानले आफ्नो तयारी गर्दै आएको उनको भनाइ छ । जुम्ला एक हजार ३६० जना, कालिकोट ३८८ जना, हुम्ला १३३ जना, मुगुको ३९ जना गरी गरी एक हजार ८८१ ज्नाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जनाएको छ । प्रतिष्ठानमा आरटी पिसिआर परीक्षण उपकरण सञ्चालन अघि जुम्लाका ३३९ जनाको सुर्खेत र काठमाडौँमा पिसिआर परीक्षण गरिएकोमा सवै जनाएको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो ।
आरडिटी पोजेटिभ रिपोर्ट, पिसिआर नेगेटिभ
हुम्ला र मुगुमा आरडिटि परीक्षण पोजेटिभ देखिएका तीन जनाको पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालका अनुसार हुम्ला नाम्खाका २ जना र मुगु खत्याडका १ जनाको आरडिटि पोजेटिभ देखिएकाको थियो । आरडिटी पोजेटिभ देखिका व्यक्तिको पिसिआर रिपोट नेगेटिभ आएको प्रतिष्ठानका प्रयोगशाला प्रमुख पुन मगरले बताए ।